Manohana ireo tra-pahasembanana ny Vitatsika io
Aza ny fahasembanana no jerena fa ny zava-bitany. Mandalo fahasahiranana ny toeram-paokarana ireo akanjo fentina miasa iandraiketan'ny Union des Associations des Handicapés de Madagascar (UNAHM) etsy Behoririka. Efa telopolo taona mahery no nisian'io toeram-piasana io kanefa hatreto dia tsy mbola nisy ny fijerena azy manokana.
Tonga teny an-toerana ny alakamisy lasa teo ny filoha mpanorina ny antoko Vitatsika io, Raharimanana Patrick, ary nanolotra valonan-damba lehibe roa ho an'ireo mpikambana mpanjaitra entina hamitana ny asa. Ho fanamarihana ny tsingirenan'ny taona nahaterahany ary ho fahatsiarovana ny faha-53 taonan'ny nahazoana ny fahaleovan-tena no nandrisika ity kandida ho filoham-pirenena ity hanao izany fihetsika izany. "Tsapako fa tsy mahavita teny irery isika fa mila mifanampy hatrany. Tsy tiako ihany koa ny miantso hoe sembana satria manivaiva izany. Sendra olona nanana fahasembanana ara-pahitana aho indray andro izay teny Ankatso. Mbola tsy tonga akory ny fiara dia efa fantatr'ilay olona fa higadona eo. Gaga aho satria tsy nahita fiara nandalo ka izy no nampahatsiahy ahy hoe tsy henonao ve izany fofon-tsolika izany. Izay no nahatsapako fa na nanana ny masoko sy ny sofiko aza aho dia tsy azoko notsinontsinoaviko ny oron'ilay olona", hoy izy nitantara.
Nanamafy ny tao amin'ny Unahm fa manampy betsaka azy ireo ireo lamba tonga ireo satria afaka mifototra amin'ny asa sy manenjika akanjo ireo mpanjaitra. Nanazava ny sekretera jeneralin'ity fiombonana ity fa 17 monja izy ireo no manodina ny toeram-piasana amin'ny herim-pony. "Tsy misy mpijery sy mpanampy izahay. Na dia eo aza ny fahavotsanay dia tsy mena mitaha amin'ny hafa kosa ny kalitaon'ny asa. Manao ny zaitra momba ny akanjo rehetra fentina miasa izahay toy ny 'combinaisons', 'blouses', 'tabliers', 'casquettes'. Soa fa misy ireo orinasa lehibe toy ny Savonnerie Tropicale, Air Madagascar, Jirama sy ny Ostie izay manome asa anay saingy tsy ampy satria voafetra ihany koa ny asa vitanay, eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 akanjo isan'andro eo", hoy Rakotoarison Heriniaina David.
Maro ireo zo fototra tsy mbola voahaja eto Madagasikara raha ny fahasembanana no asian-dresaka. Mitaraina ireo mpanjaitra fa mitolona mafy vao tody any an-trano ny hariva. "Rehefa miantso ireo mpanampy ny mpamily dia tonga izahay fa rehefa tena hiakatra dia lazainy fa feno ary lasa izy mandeha. Izahay anie ka tsy hitaingim-potsiny fa handoa saran-dalana e", hoy ny fanazavana nomen-dRalainirina Pascal, tra-pahasembanana ara-pahitana.
Mila ezaka araka izany ny fampiharana ny lalàna 97-044 mba hahatsiarovan'ny fanjakana sy ny fiaraha-monina fa olona mitovy avokoa rehefa olom-pirenena ary mila fitsinjovana manokana ireo tra-pahasembanana mba hivoarany eo amin'ny fiainany manontolo.